Raikitra ny ady rehefa samy mamo: maty nodarohin’ny vadiny ilay ramatoa | NewsMada
Par Taratra sur 16/10/2020
Nihoatra ny alikaola… Nifamaly ireto mpivady rehefa mamomamo ka tonga tany amin’ny fifampikasihan-tanana izany. Vokany, naratra mafy tsy nahatsiaro tena ilay ramatoa, noho ny daroka nataon’ny vadiny. Tsy tana ny ainy na dia nentina teny amin’ny hôpitaly aza.
Vehivavy 23 taona iray namoy ny ainy rehefa avy nifamaly tamin’ny vadiny vao 19 taona, ny alin’ny talata teo teny Ambodivona-Soavimasoandro. Tsy nahatsiaro tena ilay vehivavy rehefa avy voadroka sy voavely kifafa ary nitarika ny fahafatesany ny vono sy ratra mafy nahazo azy. Fantatra fa mpivady niray trano nandritra ny enin-taona ireo nifamaly. Tsy mbola vita fomba ary mbola tsy niteraka ihany koa. « Ny harivan’ny 13 oktobra io, rehefa avy niasa izy mivady dia nisotrosotro tany ivelany », hoy ny fanazavan’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Nandritra izany, nivoaka kely ramatoa ary nanome vola olon-kafa. « Iny fanomezam-bola olona hafa iny no niandohan’ny fifamaliana ka notakin’ilay lehilahy tamin’ny vadiny izany », hoy hatrany ny fanazavana voaray. Taorian’izay, niakatra ny hatezeran-dralehilahy ary nikasi-tanana avy hatrany izy. Tsy ampy azy ny famelezany daka sy totohondry an-dramatoa vadiny fa mbola nangalany tahon-kifafa ihany koa nikapohany azy. Vokany, voa mafy tandrify ny lohany ilay vehivavy. Mbola novelesiny ihany koa ny tongony sy ny vatany.
Nahazo antso mahakasika ny tranga ny kaomisarian’Analamahitsy ka nidina teny an-toerana avy hatrany. Tsikaritra fa efa tsy nahatsiaro tena intsony ilay vehivavy ary feno ratra ny lohany sy ny vatany. Nentina vonjimaika teny amin’ny hopitaly ilay naratra, saingy tsy tana intsony ny ainy vao tonga teny amin’ny toeram-pitsaboana. Ilay rangahy vadiny kosa nanaovana fanadihadiana teny amin’ny kaomisaria ary natolotra ny BC 02 eny Anosy nanohizana ny famotorana. Niakatra fampanoavana, omaly, ny raharaha.
Ampahatsiahivina ny rehetra hatrany fa misy ny « Brigade féminine de proximité » misahana manokana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy. Misy ihany koa ny laharana maitso 813 ahazoana ny polisy misahana izany.